कस्तो अवस्थामा ब्रेकअप गर्नु नै सहि निर्णय हुन्छ ? - यादका टुक्रा
कस्तो अवस्थामा ब्रेकअप गर्नु नै सहि निर्णय हुन्छ ?
2 years ago 5935 Views
यदि तपाइँलाइ आफ्नो सम्बन्धको बारेमा संका छ भने, केहि सोधपुछ अनि आफ्नो अन्तरमनको कुरा सुन्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । तर तपाइँ कसरि थाहा पाउनु हुन्छ कि, कुन समयमा तपाइँको मनले अब यो सम्बन्ध समाप्त गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर भन्न थाल्छ? सम्बन्ध तोड्नु नै सहि हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि सम्बन्ध टुटाउनु त्यति सजिलो भने हुदैन । यस्तो गर्नु भन्दा पहिले यो सुनिस्चित गर्नुहोस् कि, यो नै सहि विकल्प हो ।
विचार गर्नुहोस्, के तपाईंको पार्टनरमा कुनै यस्तो कुरा छ, जसलाई तपाइँ स्वीकार गर्न असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के तपाइँ चाहानु हुन्छ कि तपाइँको लागि उसले त्यो बानि बदल्दियोस । यस्तो अवस्थामा यो पनि हुन सक्छ कि, तपाईंको पार्टनरले उल्टो यो कुरामा तपाइँमा बदलाव चाहोस्। के यो कुरा सम्बन्धमा अरु कुराहरु भन्दा महत्वपूर्ण छ? यदि छैन भने, त्यसैलाई स्वीकार गर्ने कोशिस गर्नु नै उत्तम हुनसक्छ। यदि यो धेरै ठुलो कुरा हो अनि तपाइँ त्यो कुरालाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने अनि तपाईंको पार्टनर त्यसलाई बदल्न चाहदैन भने ब्रेकअप नै सहि विकल्प हो ।
कहिलेकाहिँ तपाइँ आफु भित्रको अशुरक्षा अनि डरको कारणले पनि सम्बन्ध तोड्न चाहनुहुन्छ। किनकि कुनै कुनै कुरा तपाइँ महसुस गर्न चाहानुहुन्न जस्तै, असुरक्षा अनि धोकाको डर । हुनसक्छ कि तपाइँ पहिले पनि कुनै सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस सम्बन्धमा तपाईंलाइ ढोका मिलि सकेको छ । यहि कारण तपाइँ यो व्यक्ति संग पनि सम्बन्ध तोड्न चाहानुहुन्छ किनकि तपाईंलाइ पहिले जस्तै धोकाको पिडा सहनमा डर छ । यस्तो कारणले सम्बन्ध तोड्नु सहि होइन । तपाइँ ति आफ्ना डर संग भाग्नु को साटो जुध्न जरुरि हुन्छ । यदि तपाईंलाइ यी नै आफ्ना कारण ठुला लाग्छन् भने तिनका बारेमा आफ्नो पार्टनर संग कुरा गर्नुहोस् । यसो गर्दा सायद उसको साताको कारणले तपाइँमा यो सम्बन्ध प्रति बिश्वास पैदा हुन सक्छ ।
के तपाइँ उसको भावना टुट्छ होला भनेर मात्र सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाइँ अरुको भावानाको ख्याल राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ अनि असलियतमा तपाईं मनले यो सम्बन्धमा रहन भने चाहानु हुन्न तर उसलाई चोट पुग्छ भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाइँले यो बुझ्नु पर्छ कि, तपाइँले ऊ प्रति सहानुभूति राखेर कुनै एहासान गर्नु भएको छैन । यदि तपाइँलाइ लाग्छ कि यो सम्बन्धको कुनै भबिष्य छैन भने सकेसम्म चांडो सम्बन्धलाई तोड्नु नै सहि हुन्छ । यसो गर्दा उसलाई चाडै यो पिडाबाट निस्किने र भबिष्यमा अर्को सम्बन्ध बनाउने मौका मिल्छ । हुनत, कुनै शान्त समयमा सम्बन्धको अन्त्य गर्नु आदर्श हुनसक्छ, तर कुनै बिशेस दिनलाई पर्खेर यसलाई लम्ब्याउदै भने जानुहुन्न। यसले गर्दा सम्बन्ध तोड्न झनै अफ्ठेरो हुन सक्छ ।
के तपाइँ एक्लो हुनको डरले मात्र सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? कहिलेकाहिँ मान्छेहरु एक्लो हुनुको डरका कारण मात्र सम्बन्ध तोड्न हिचकिचाउछन् । तर कुनै पनि मान्छेको जीवनमा मात्र प्लेसहोल्डर (स्थान ओगट्ने) को रुपमा मात्र रहनु केवल त्यो मान्छेको लागि मात्र हैन तपाइँको लागि पनि अनुचुत हो । किनकि यसो गरेर तपाइँ एक व्यक्तिको रुपमा बिकसित हुने अनि आफ्नो लागि सहि व्यक्ति खोज्ने सम्भावना झनै न्युन गर्दै हुनुहुन्छ । आशावादी हुनुहोस् अनि एक्लोपन पनि इन्जोई गर्नुहोस् । के तपाइँको सम्बन्धमा, भविष्यको बारेमा कुनै कुरा हुदैनन् ? यदि तपाईंहरु सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तर भविष्यको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न अनि कुनै योजना बनाउनु हुन्न भने तपाइँहरु त्यो सम्बन्धमा सिरियस हुनुहुन्न । यस्तो सम्बन्धमा रहिरहनुको कुनै तुक हुदैन। के तपाईंले यो सम्बन्धमा शारीरिक, मानशिक या आर्थिक शोषण भोग्नु हुँदैछ? यस्तो हो भने ढिला नगरी सम्बन्ध समाप्त गर्नु पर्छ ।
के तपाइँलाइ कुनै यस्तो कुरा गर्न दवाब सिर्जना हुन्छ, जसमा तपाइँ सहज महसुस गर्नुहुन्न ? यदि यस्तो हो भने यो सम्बन्धमा रहनु तपाइँको लागि हानिकारक हुनसक्छ । हरेक केटिलाइ फरक फरक प्रकारका केटाहरु मन पर्छन। केटीहरु केटामा यस्ता गुणहरु खोज्छन जसमा उनीहरु प्रति इमान्दारी र बफादारी मिलोस। कुनै पनि सम्बन्धमा यो जरुरि हुन्छ कि, त्यहाँ एकअर्का बीच सम्मानको साथमा एकअर्काको गुणहरु प्रति आकर्षण पनि होस्। आउनुहोस जानौ केटाहरुका यस्ता गुणका बारेमा जसले केटि मान्छेलाई आकर्षित गर्छन्।
संवेदनशील हुनु : महिला र केटीहरूलाइ केटा मान्छेको संवेदनशीलता धेरै मन पर्छ। उनीहरु आफ्नो जीवन साथीमा एक संवेदनशील व्यक्ति फेला पार्न चाहन्छन। केटीहरू विश्वास गर्छन् कि सम्बेदनशील केटाहरु दिलका साफ हुन्छन् अनि असल जीवन साथि सावित हुन्छन। जो अरुको भावाना प्रति सम्बेनशील हुन्छन् ति मान्छे असल व्यक्ति हुनुका साथै एक पूर्ण जीवन साथि हुने कुरा निश्चित प्राय हुन्छ।
राम्रो सेन्स अफ ह्युमर : केटिहरुलाई राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको केटा मन पर्छ। किनकि यस्ता केटाहरु आफु खुशी हुनुका साथै आफ्ना ओरिपरिका मान्छे हरुलाई पनि खुशी राख्ने सामर्थ्य राख्छन। जुनसुकै माहोलमा पनि यस्ता मान्छे आकर्षणको केन्द्र हुने गर्छन्। हरेक केटि मान्छे चाहान्छन कि आफ्नो जीवन साथि, आफ्नो परिवार वा साथि भाइ जम्मा भएको ठाउँमा आकर्षणको केन्द्र बनोस्। सबैले उसलाई मन पराइदिउन्। उसको तारिफ गरिदिउन्। यस्तो हुनका लागि, ऊ संग राम्रो सेन्स अफ ह्युमर हुन जरुरि हुने गर्छ। यसैले केटीहरु केटामा सम्बेदनशीलता पछी राम्रो सेन्स अफ ह्युमर जरुर खोज्छन।
सहयोगी बानि भएका : केटीहरुलाई यस्ता केटा मन पर्छन जो सहयोगी स्वभावका हुन्छन। त्यस्ता पुरुषहरूले महिलाहरूलाई कसरी आदर गर्ने भनेर जान्दछन् र उनिहरूलाई सहयोग गर्न कहिले पछाडि हुँदैनन्। सहयोगी बानि सबैलाई मन पर्छ। सहयोगी मान्छेको साथ रहन सहज हुने गर्छ। तिनीहरु संग जीवन बिताउन धेरै सरल हुन्छ। जसले घर ब्यबहार देखि लिएर सम्पूर्ण अफ्ठेरो हरुमा आफ्नो पार्टनरको साथ् दिन्छन। सहयोगी स्वभाव भएको पतिले पत्नीलाई घरका काममा सघाउने गर्छ। यस्तो हुँदा पत्नीलाई घर चलाउन सहज हुने गर्छ। सहयोगी भावाना नभएका मान्छेले कहिल्यै अरुको दुख देखदैनन। देखे पनि उसलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने सोच्दैनन्, यस्तो भयो भने त्यस्तो मान्छे संग जीवन बिताउन कस्टकर हुनेगर्छ। यहि कारणले केटीहरु सहयोगी स्वभावका केटा मान्छेलाई मन पराउछन्।
बौद्दिक क्षमता : केटि या महिला यस्ता पुरुष संग आकर्षित हुन्छन जो ज्ञानी हुन्छन्। धेरैजसो केटीहरु केटाको बौदिकतामा लालाहित हुने गर्छन्। समाज, बिज्ञान, साहित्य आदिको बारेमा ग्यान राख्ने पुरुषहरु केटि मान्छेलाई औधि मन पर्छन्। उनीहरु चाहान्छन कि आफ्नो जीवन साथि जुनसुकै ठाउँमा बातचित गर्दा होस् या तर्क गर्दा कुनै कुरामा कमजोर साबित नहोस्। उनीहरुलाई सबै कुरामा सामान्य रुपले दखल भएको केटा औधि मन पर्छ। अध्ययनमा रुची राख्ने केटा केटि मान्छेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्।
खाना बनाउन जान्ने : केटीहरुलाई खाना बनाउन जान्ने केटा खुब मन पर्छ। हरेक केटीहरु आफ्नो पार्टनर खाना बनाउन जानोस भन्ने चाहान्छन। कसले चाहदैन र कहिलेकाहिँ आफ्नो जिवान साथीले आफ्नो लागि भान्सामा छिरेर बिशेष खाना बनओस् अनि प्रेमले दियोस्? भनिन्छ प्रेमको बाटो पेट हुदै मुटु सम्म पुग्छ। त्यसैले त केटीहरु खाना बनाउन जान्ने पुरुषहरु संग प्रेम गर्न लालायित हुने गर्छन्। यदि तपाईं पनि एक असल जीवन साथीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने खाना बनाउन सिकी हाल्नुहोस।
भावानात्मक रुपमा बलिया : केटीहरू यस्ता केटाहरूलाई मन पराउँछन् जो भावनात्मक रूपमा बलिया हुन्छन्। कुनै पनि केटीले यस्ता केटाहरूलाई मन पराउँदैनन् जो निर्णय लिन असमर्थ हुन्छन् र बच्चाहरूको जस्तो व्यवहार गर्छन्। भावानात्मक रुपले बलिया केटा मान्छेले जीवनमा असल निर्णय अनि अनि कठिन परिस्थतिको सामाना गर्न सक्छन। अफ्ठेरा परिस्थ्तितीमा पनि नडराई सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्ने केटा मान्छेलाई केटीहरु औधि मन पराउछन्।
Don't Miss it च्याखुरीको बोइफ़्रेन्ड – टुक्रा
Up Next आफुले माया गरेको मान्छेलाई कसरी बिर्सने ?
छाती दुख्ने समस्या छ ? कतै यी रोगले त हाईन ? जान्नुहोस् यस्ता छन् कारण
छाती दुख्नुको अर्थ मुटुकै कारण हो भन्न मिल्दैन, हामी भ्रममा परेर छाती दुख्नुको कारण मुटुमै समस्या भएको ठान्छौ तर त्यो…
4 months ago 1569 Views
जति मिलेका भए पनि हरेक दम्पतीमा के कारणले झगडा परेको हुन्छ ?
दम्पतीबीच के निहुँमा झगडा पर्छ ? धेरै दम्पतीले यसबारे चासो राखेकै हुँदैनन् । अर्थात्, आफूहरूबीच हुने झगडाको कारण वा बिउ…
5 months ago 1880 Views
खासगरी के कुरामा पर्छन् बुढाबुढीका झगडा ? के हुन् झगडाका उपचार ?
5 months ago 955 Views
श्रीमती गर्भवति भए पछि कस्ता हुन्छन् श्रीमानका जिम्मेवारी जसले असल श्रीमान बनाउछ ?
अहिले सबैको ध्यान कोरोनातर्फ मोडिएको छ । एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणको भय, अर्कोतर्फ अस्पताल आउजाउ गर्ने प्रतिकुलता । यो समस्याले…
5 months ago 728 Views
श्रीमतीलाई खुसी पार्ने काइदाका २५ सुत्रहरु के कस्ता छन् ?
नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक…
5 months ago 1578 Views
लभ परे पछि कसैले यी ५ कुरा आफुलाई माया गर्ने मान्छेलाई गरिन्छ गरिन्छ
प्रेम संसारमा सबैभन्दा मिठो अनुभूति हो । प्रेमिल जोडीहरु त्यही अनुभूति संगालेर बाँच्छन् । हामी कसैलाई माया गर्छौं, मन पराउँछौ…
9 months ago 2304 Views
५ वटा मात्रै छन् कोही पनि सफल बनाउन सक्ने सुत्रहरु
हामी दिनभर जे गर्छौ, जति गर्छौ, जसरी गर्छौ, त्यसको लक्ष्य के होला ? हामी के गरिरहेका छौं ? किन गरिरहेका…
7 months ago 1324 Views
नेपालमा प्राय: युवतीहरूले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा हो ‘पानी पुरी’। ‘पानी पुरी’ को स्वाद चाख्न विशेष गरी सडकमा युवतीहरूको लाइन…